Nyefee music si iPhone / iPad / iPod ka PC / Mac
Nyefee Music Site iPhone / iPad / iPod ka PC / Mac
Gaa na akara ngosi nke TunesGo na kọmputa gị na abụọ pịa imeghe ya na nke a n'ụlọ ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta.
Ọzọ mkpa ka ị jikọọ gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPad ma ọ bụ iPod) gị na kọmputa na n'ihi nke a, na-USB na jikọọ na otu njedebe nke ngwaọrụ na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke PC ma ọ bụ Mac. Ozugbo ngwaọrụ jikọọ a ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta (ihuenyo ogbugba maka iPhone, iPod na iPad karị).
Ugbu a ị chọrọ anya n'ihi na songs na tracks ugbu a na gị iOS ngwaọrụ nke ịkwaga nhọrọ nke "Music" bụ nke ugbu na n'aka ekpe nke TunesGo n'ụlọ peeji.
Ma site nyere ndepụta, họrọ songs nke na-ịchọrọ ị nyefee gị PC ma ọ bụ Mac (ihuenyo ogbugba n'okpuru na-egosi songs họrọ na iPhone, iPod na iPad karị)
Ugbu a n'elu mmanya nke TunesGo n'ụlọ peeji aga nhọrọ nke "Export Iji"
Nzọụkwụ 6. Nịm nchekwa
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ nchekwa gị PC ma ọ bụ Mac ebe ị chọrọ songs ga-azọpụta. Na n'okpuru ihuenyo ogbugba, nchekwa nke "My music" na-ahọrọ.
Ugbu a họrọ songs nwere ike zigara iji nhọrọ nke "Mbupụ na kọmputa m" ma ọ bụ "Export ka Mac" nke ọbụna ọdabara. Na nke a, họrọ songs ga-egosi na nchekwa ị họrọ.
Ọzọ: iPhone / iPad / iPod ka akporo ekwentị